Raggii ka dambeeyay Qaraxii Hotel Saxafi oo xukun dil ah lagu ridday | Wardoon
Home Somali News Raggii ka dambeeyay Qaraxii Hotel Saxafi oo xukun dil ah lagu ridday
Raggii ka dambeeyay Qaraxii Hotel Saxafi oo xukun dil ah lagu ridday
Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun ku riday rag lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Al Shabaab oo loo heystay dambiyo kala duwan.
Ragga ka tirsanaa Al Shabaab ayaa ku eedeysnaa inay qeyb ku lahaayeen weerarkii ka dhacay Hotel Saxafi Bishii November ee sanadkii hore 2018 iyo qaraxii ka dhacay Taalada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho.
Maxamed Cali Barrow iyo Canshuur Cismaan Abuukar ayaa Maanta Maxkamada Ciidamada waxa ay ku ridday Xukun dil toogasho ah, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay socotay dhageysiga dacwadooda.
Maxkamada darajada koowaad ee ciidamada xooga dalka, ayaa sheegtay in labaduba ay saarnaayeen markii la qabanayay Gaarigii ku qarxay agagaarka Taalada Daljirka Daahsoon Maalintii uu dhacay qarixii Tiyaatarka.
Labada ruux ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay lahaayeen abaabulka qaraxii ka dhacay Hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay dad shacab ah.
Maxkamadda ayaa ugu dambeyn sheegtay inay sidoo kale socdaan dhageysiga dacwadaha loo heysto dad ku eedeysan inay ka tirsan yihiin Al Shabaab, islamarkaana dhawaan go’aano laga soo saari doono.
Previous articleCiidamo ka tirsan Milateriga Soomaaliya oo oo kasoobaxay Mahadaay, Qalimow, Garsaale
Next articleDhageyso:-Dowladda Soomaaliya oo sheegtay waqtiga ay dhaceyso doorashada Galmudug
Wararkii ugu dambeeyay shirkii Nairobi uga socday Madaxda maamul goboleedyadda
Congreska Maraykanka oo u codeeyey in xilka laga qaado Madaxweyne Trump